2012-05-20 ~ Myanmar Express
ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် စစ်သံမှူး များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည် ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် စစ်သံမှူး Colonel Brey R-Sloan နှင့် စစ်သံမှူး အသစ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့် Colonel William C-Dickey တို့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ပိုင်း တွင် နေပြည်တော် ရှိ ဇေယျာ သီရိ ဗိမာန် ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။ထိုသို့ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ တွင် ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနှင့် အတူ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ၊ စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ် သူရ သက်ဆွေ၊ စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ခင်အောင်မြင့် နှင့် နေပြည်တော် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အေးတို့ တက်ရောက်ကြသည်။Myanmar Express
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင်း နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုများကြောင့် တကမ္ဘာလုံးက ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုလျှက်ရှိပြီး ပြည်တွင်းတွင်လည်း ဆန္ဒပြမှုများ ကင်းရှင်းလာခဲ့ရာမှ ယခု တခါ လျှပ်စစ်မီးကို အကြောင်းပြပြီး သွေးတိုးစမ်း ကာ ဆန္ဒပြမှုများ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ပထမ ဆုံး သွေးတိုးစမ်းတဲ့ အနေနဲ့ မန္တလေးမှာ ဖယောင်းတိုင် ကို မီးရှို့ပြီး ဆန္ဒပြ ကာ တာဝန်ရှိသူများတဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ လုံခြုံရေး ရဲများနဲ့ တာဝန်ရှိသူများက ဘာမှ မလုပ်မှန်း သိလာတဲ့ အခါမှာ နောက်တနေ့မှာ ရန်ကုန် က အဖွဲ့တွေက သွေးတိုးစမ်းကာ အော်ဟစ် တောင်းဆို ဆန္ဒပြ ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ ဖယေင်းတိုင် တင်မကတော့ပဲ အခြေခံဥပဒေ တွေပါ ပါလာပြန်ပါတယ်။ လုံခြုံးရေး အဖွဲ့များနဲ့ ရဲများက ဘာမှမလုပ်မှန်း သိလာတဲ့ အခါမှာ နဲနဲချင်း တိုးပြီး သွေးတိုး စမ်း ဖို့ စီစဉ်ကြပြန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို မီးမရှို့တော့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့ဆန္ဒပြကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကြားရပြီးနောက် လူအတော်များများ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးကတော့ ဒီသတင်းက မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဆန္ဒပြသူများအနေနဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကိုသာ မီးရှို့ရဲကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့ရလောက်အောင် သတ္တိ မရှိကြကြောင်း ကို အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ ဖယောင်းတိုင် မီးရှို့ဆန္ဒပြသူများထက် သတ္တိရှိသော တရုတ်"ကျွန်တော့်အထင်ပြောရရင်တော့ ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေ အဲ့လောက် "ဇ" မရှိလောက်ဘူးဗျ... လူများလို့ ဟေး ဟားး လုပ် တာပဲရှိတာ... ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်နာကျင်မှာတော့ အတော်ကြောက်ကြတယ်ဗျ... သေမှာမကြောက်ပါဘူး သတ္တိရှိလှပါတယ်၊ ပြည်သူ့အတွက အနစ်နာခံလှပါတယ်ဆိုတဲ့ NLD နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် တွေတောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင် မှာ တအားကြောက်ကြတယ်လေ.. ဒီတော့ ဒါမျိုးက မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်ဗျ... တရုပ် အတိုက်အခံ တွေလောက် သတ္တိရှိဖို့ နောင် အနှစ် ၅၀ လောက် ကြိုးစားရမယ်... " လို့ ဆိုပါတယ်။မြန်မာ ဆန္ဒပြသူ အများအပြားဟာ တရုတ် ကို အပြစ် တင်တတ်ပေမယ့် တရုတ် တွေလောက် သတ္တိမရှိကြောင်း ပြောကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။Myanmar Express
ဇူလိုင်လွှတ်တော်တွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေ တင်သွင်းမည်
ဇူလိုင်လတွင် ကျင်းပမည့် ပထမအကြိမ် စတုတ္ထပတ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေအား တင်သွင်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းဇော်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေမရှိခြင်းကြောင့် တရားနည်းလမ်းတကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခက်အခဲများ ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဥပဒေမရှိသေးတော့ ဘယ်လိုတိုင်ကြားရမလဲ၊ တရားစွဲရမယ့် ဖြစ်စဉ်လား၊ လျော်ကြေးတောင်းရမယ့် ဟာလားဆိုတာ အတိအကျမသိဘူး။ ဥပဒေအတိအကျ ထွက်လာမှ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းပိုင်း အားနည်းတာလား၊ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်း အားနည်းတာလား၊ အတုဆိုရင် ဘယ်လိုအရေးယူရမယ်ဆိုပြီး ဥပဒေထွက်လာရင် အတိအကျပါလာပါမယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်၌ တရားဝင်တင်သွင်းနေသော စားသောက်ကုန်များအား စားသုံးသူထိခိုက်နိုင်မှုအပေါ် အစွမ်းကုန်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပေးနေသော်လည်း တရားမဝင် နယ်စပ်မှ ဝင်လာသည့် စားသောက်ကုန်များကိုမူ စီစဉ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းမှ “ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းနဲ့ နယ်စပ်က တရားဝင် သွင်းလာတဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးတွေကို စစ်ဆေးပါတယ်။ တရားမဝင် သွင်းလာတာကိုတော့ ကျန်းမာရေးပိုင်းက မသိပါဘူး။ အဲဒီနေရာမှာ ရဲနဲ့ အကောက်ကာစတန် ဂျူတီမဆောင်ဘဲ တရားမဝင် သွင်းကြတယ်။ ဒါကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ စဉ်းစားနေတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ တရားမဝင် တင်သွင်းလာသည့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးများအား စီစဉ်နိုင်ရန်အတွက် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဦးစီးဌာန၌ ငွေကြေးအင်အား၊ လူအင်အား အလုံအလောက်ရှိလျှင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကဲ့သို့ နယ်စပ်ဂိတ်များ၌ စစ်ဆေးမည့်သူများအပြင် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုပါ ကောင်းမွန်ပါမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ထိရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ဆောင်ရွက်မှု နှေးကွေးပါက မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှ အချိန်ပေးပြီး အစစ်အဆေးမခံဘဲ တရားမဝင်သာ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်း ကောင်းမွန်ပါမှ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်ရှိ ရုံးများနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲသည်။ ထို့ပြင် ဇူလိုင်လတွင် တင်သွင်းမည့် စားသုံးသူကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပေါ်ပေါက်လာပါက ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူ ပြုနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ ဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက်မှာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ရက် မှ ကြားဖြတ် Press Council နှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တခုကို ရန်ကုန်မြို့ ၀ါးတန်းလမ်း ပန်ဒါဟိုတယ် စားသောက်ဆိုင်တွင် ကျင်းပလျှက်ရှိသည်။ သတင်းထောက် ဦးရေ ၄၀ ကျော် တက်ရောက်သည့် ယနေ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကြားဖြတ် Press Council ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ပါဝင်သင့်သည့် အချက်အလက်များ၊ တာဝန်များ၊တို့ကို ဆွေးနွေးလျှက်ရှိကြသည်။ မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်သည် လွတ်လပ်သည့် သတင်းစာသမားများဖြင့် ယခင်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည်။ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်လည်း NLD ၏ လုပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး များစွာစိတ်ပျက်မိပါကြောင်း မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်မှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။Myanmar Express
ရန်ကုန်အမှိုက် ဂျပန် မီးရှို့စက်ဖြင့် မီးရှို့ပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်မည် ဟုဆို
From : The Voiceရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ဂျပန်နိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် အမှိုက်တန် ၆၀၀ အား ဂျပန်မီးရှို့စက် အသုံးပြုကာ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းရှိ ထားဝယ်ချောင်တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမည် ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ် ၄ ဒသမ ၅ မဂ္ဂါဝပ် ထွက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာန၏ ဒုတိယဌာနမှူးက ပြောကြားသည်။အဆိုပါ မီးရှို့စက်ကို စတင် တည်ဆောက်နေပြီး အမှိုက်များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ရန် အတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ အမှိုက်အစို၊ အခြောက် ခွဲခြား၍ အမှိုက်စွန့်ပစ်သည့် စနစ်အား ကျင့်သုံးစေခဲ့သည်။အမှိုက်အစိုများကို မီးရှို့ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိသဖြင့် ပြည်သူများက အမှိုက်အစို၊ အခြောက် ခွဲခြား စွန့်ပစ်သည့် စနစ်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကြစေလိုကြောင်း မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက နှိုးဆော် ထားသည်။ရန်ကုန်မြို့တော်၏ တစ်ရက်အမှိုက် စွန့်ပစ်မှုမှာ တန် ၁၆၀၀ ခန့်ရှိသော်လည်း တန် ၁၂၀၀ ခန့်သာ မြို့တော်စည်ပင်မှ သိမ်းဆည်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ကျန်အမှိုက်များကို မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်များ၊ ရေနုတ်မြောင်းများနှင့် နောက်ဖေးလမ်းကြား အချို့တွင် စည်းကမ်းမဲ့စွာ စွန့်ပစ်နေကြ သေးကြောင်း၊ အဆိုပါ အမှိုက်အစို၊ အခြောက် ခွဲခြား စွန့်ပစ်သည့်စနစ် အောင်မြင်ပါကဆက်လက်၍ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ မြို့တော်ကြီးများကဲ့သို့ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သည့် အမှိုက်နှင့် ပြည်လည် အသုံးပြု၍ မရသော အမှိုက်ဟူ၍ ခွဲခြားစွန့်ပစ်သည့် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေး ဌာနထံမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ Myanmar Express
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့၏ ဘယ်လ်ဂျီယံ နှင့် ဂျာမနီ ခရီးစဉ် မှတ်တမ်း
ဥရောပသမဂ္ဂ ပါလီမန်ဥက္ကဌ Mr. Martin Schulz နှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ပါလီမန်များ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင် သော ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် မေ ၂၃ ရက် ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်က လေကြောင်း ခရီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိသည်။ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ ပါလီမန်အကြီးအကဲများ၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးများ နှင့် တွေ့ဆုံပြီး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယင်းသို့ တွေ့ဆုံ ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မေ ၁ဝ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲမြို့ရှိ ဥရောပသမဂ္ဂပါလီမန် အဆောက်အအုံ ၌ ဥရောပ ပါလီမန် ဥက္ကဌ Mr. Martin Schulz နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သည်။ထို့နောက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဥရောပ သမဂ္ဂကောင်စီရုံး အဆောက် အအုံ၌ ဥရောပကောင်စီ ဥက္ကဌ Mr. Herman Van နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း နှင့် ဥရောပ ကောင်စီ ဥက္ကဌ Mr. Herman Van Rompuyယင်းနောက် မေ ၁၁ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့် အဖွဲ့သည် ဥရောပ ပါလီမန် အဆောက်အအုံ၌ ဥရောပ သမဂ္ဂကော်မရှင်ဥက္ကဌ Mr. Jose Manuel Barroso နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ ကော်မှရှင် ဥက္ကဌ Mr. Jose Manuel Barrosoဆက်လက်၍ ညနေ ၅ နာရီခွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့သည် ဥရောပသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ၌ ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံခြား ရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Ms. Catherine Ashton နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။မေ ၁ဝ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်၍ ''Myanmar One Year after the Elections '' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပခဲ့ရာ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ သံတမန်များ၊ စာနယ်ဇင်း ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သုတေသီများနှင့် စိတ်ပါ ဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။မေ ၁ဝ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း နှင့် မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Dider Reynders နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် နံနက် ၁ဝ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် Flemish ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် (Minister-President) Mr. Kris Peeters နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့သည်။မေ ၁ဝ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၁ဝ မိနစ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ဥရောပသမဂ္ဂ ပါလီမန် အဆောက်အအုံ၌ ဥရောပ သမဂ္ဂ၊ ASEAN နိုင်ငံများဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကော်မတီ ဥက္ကဌ Dr. Werner Lagen , MEP ဦးစီးသော လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ASEAN နိုင်ငံများဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ Dr. Werner Lagen , MEP ဦးစီးသော လွှတ်တော်အမတ်များ ဥရောပသမဂ္ဂ အဆောင်အအုံတွင် ဆွေးနွေးစဉ်ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် မေ ၉ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီခွဲက ဘာလင်မြို့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံ ပါလီမန် ဥက္ကဌ Ouú|(President of the Bundestag) Dr. Nobert Lammert နှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဂျာမန်ပါလီမန် အဆောက် အအုံအတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။မေ ၈ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဂျာမန်ပါလီမန် အဆောက်အအုံ၌ ပါလီမန်စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီဥက္ကဌ Ms.Dagma rW'o'hrl နှင့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မေ ၆ ရက် ည ၈ နာရီက ဂျာမနီနိုင်ငံ မြူးနစ်မြို့သို့ ရောက်ရှိရာ ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးတင်ဝင်းနှင့် Bavarian ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ Hans Seidel Foundation (HSF) မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် များက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ မေ ၇ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီက Bavarian ပြည်နယ် ပါလီမန် ဥက္ကဌ Mrs. Barbara Stamn နှင့်တွေ့ဆုံပြီး မြူးနစ်မြို့ရှိ Bavarian ပါလီမန်၌ နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ ထို့နောက် Bavarian ပြည်နယ် လွှတ်တော် အဆောက် အအုံအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် မေ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dr. Guido Westerwelle နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သည်။ ထို့နောက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီး မြ. နခုေMr. Eckart Von Klaeden နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် မေ ၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Mr. Dirk Niebel နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်းနှင့် ဂျာမနီ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး Dr. Guido Westerwelleပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ခေါင်း ဆောင်သော မြန်မာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မေ ၈ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲက ပို့ဆောင်ရေးနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန Parmanentary State Secretary, Mr . Rainer Bomba နှင့်လည်းကောင်း၊ ညနေ ၅ နာရီခွဲတွင် စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန Parliamentary State Secretary Mr. Peter Hintz နှင့်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Myanmar Express
လျှပ်စစ်မီးကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ စဉ်းစားချင်ရင် စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ရနုိုင်ပါတယ်
From : တင်လတ်
လက်ရှိမှာ ကျွန်တော်ဟာ လျှပ်စစ်ဌာနက ၀န်ထမ်းဖြစ်ပေမယ့် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခုရေးမှာက အစိုးရသတင်းစာတွေ ရုပ်သံတွေက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်များကိုပဲ ပြောမှာပါ။ လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ မဟုတ်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လျှပ်စစ် အသုံးဆုံး ဒေသက ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ 600MW လောက်သုံးပါတယ်။ ဒုတိယ မန္တလေးပါ။ 120MW လောက်သုံး ပါတယ်။နေပြည်တော် 50MW တောင်ကြီး25MW မုံရွာ 15MW စသည်ဖြင့် အခြား မြို့ကြီးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်စု အနေနဲ့ ခွဲပြောရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ သုံးအိမ်မှာ နှစ်အိမ် မီးရပါတယ်။ ၆၆% ဆိုပါတော့။ ဒုတိယက ကယားပြည်နယ်ပါ သူက ၃၅%နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ နာမည်ကျော် ဘီလူးချောင်းစက်ရုံကြီးကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ ပြီးတော့ ပြည်နယ်ကလည်း သေးတော့ မီးရတဲ့ အိမ်များတာပါ။ သူတို့နောက်မှာ အစဉ်လိုက် နေပြည်တော်ဒေသ ၃၄% မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၃၃% စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်။ ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ခုမှာ မီးအရအနည်းဆုံးက ဧရာဝတီတိုင်းပါ ၁၀%ကျော် လေးပဲရှိပါတယ်။ သူက လူဦးရေများပြီး မြစ်ချောင်း များလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ချင်းပြည်နယ်တောင်မှ ဧရာဝတီရဲ့ အထက်မှာ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ကြားဖြတ်ကျွန်တော့်အမြင်လေး ပြောရရင် ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ အိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ ၃၀%လောက်ပဲ မီးရတယ်ဆိုပါတယ်။ သူက ပြည်နယ်တိုင်း၁၄ခုမှာ အဆင့်လေးမှာပါ။ ဒါဟာ ရှမ်းတစ်ပြည်နယ်လုံးကို ပြောထားလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရှမ်းရှေ့ ရှမ်းတောင် ရှမ်းမြောက် ပြန်ခွဲရင်တော့ ရှမ်းတောင်က ကယားပြည်နယ်ထက် မီးရတဲ့နှုန်းသာမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တောင်ကြီးခရိုင်တစ်ကြောမှာ မီးမရတဲ့ရွာနဲ့ မီးရတဲ့ရွာဆိုရင် မီးရတဲ့ရွာက ပိုများပါတယ်။ လွိုင်လင်ခရိုင်ဆိုရင်လည်း မီးရတဲ့နှုန်းမြင့်ပါတယ်။ ကျောက်ဆည်နဲ့ ကပ်ရက် ရွာငံမြို့ဆို မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံး မီးပျက်တောင် သူက တစ်ခါတစ်လေ မပျက်ပါဘူး။ ကင်းတားစက်ရုံက မီးကို တိုက်ရိုက်ယူထားတာမို့ပါ။ ရှမ်းတောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ပါ။
KIA တို့၏ လက်ချက်ကြောင့် ပျက်ဆီးသွားသော ရွှေလီ - မန်စံ ဓာတ်အားပေးတာဝါတိုင်များ
မြန်မာပြည်လျှပ်စစ်ရဲ့ ၇၀%ကျော်ကို ရေအားကထုတ်ပါတယ်။ ၂၀%နှုန်းလောက်ကို သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကထုတ်ပြီးတော့ ၈%က ရေနွေးငွေ့စက်ရုံတွေက ရပါတယ်။ အခြားနည်းတွေက ၁%အောက်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အားနည်းချက်လာပါပြီ။ မီးသုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်နား တစ်ဝိုက်မှာ တစ်မြို့လုံးစာကို စက်ရုံတစ်ခုတည်းက နေပေးဖို့ စက်ရုံလောက်လောက်လားလား မရှိပါဘူး။ မန္တလေးဆိုရင် သူ့သုံးတာရဲ့ ငါးဆလောက် ထုတ်ပေးမယ့် ရဲရွာစက်ရုံက မိုင် ၄၀ လောက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ တောင်ကြီးဆိုရင် ကျိုင်းတောင်း၊တီကျစ်၊ ဇော်ဂျီ စတဲ့ စက်ရုံတွေ ရှိပါတယ်။ နေပြည်တော်ဆို လည်း သူသုံးတာရဲ့ ငါးဆကျော် ထုတ်နိုင်တဲ့ ပေါင်းလောင်းစက်ရုံက ၁၁မိုင် အကွာမှာ ရှိပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ရေအားလျှပ်စစ်ရဲ့ သဘာဝအရ တောထဲမှာပဲ ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် တောနက်နက်နဲ့ ဝေးတဲ့ ရန်ကုန်ဟာ မီးရဖို့ အတွက် လိုင်းအရှည်ကြီးတွေ ဆွဲရပါတယ်။ လိုင်းရှည်ရင် ဆုံးရှုံးမှုများတာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်ကို လျှပ်စစ် 100MW ရောက်ဖို့ ကျွန်တော့စိတ်ထင် 125MW လောက်ပို့ပေးမှ ရပါလိမ့်မယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်ရုံတွေကလည်း 300MW လောက်ပဲ ထုတ်နိုင်တာပါ။ ရန်ကုန်သုံးတာရဲ့ တစ်ဝက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ၀မ်းသာစရာကတော့ ရန်ကုန်နားမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဓာတ်အားပေးရုံဆောက်ဖို့ ကိုရီးယားက လာပြီးဆွေးနွေးနေတာ သတင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ MW 500 ကျော်ရှိပြီး ဒလမှာ ဆောက်မှာ လို့သိရပါတယ်။ နောက်ပြီး ထန်းတပင်မှာလည်း 375MW ရှိတဲ့ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဆောက်နေသံ ကြားပါတယ်။
စဉ်းစားစရာတစ်ခုပေါ်လာပါပြီ။ ရန်ကုန်လူဦးရေက ၆သန်းပါ။ လက်ရှိလျှပ်စစ်သုံးနေတာ 600MW။ စင်ကာပူလူဦးရေက ၄သန်းခွဲပါ။ လက်ရှိလျှပ်စစ်သုံးနေတာက 11000MW တောင်ရှိပါတယ်။ အဲတော့ မြန်မာပြည်သာ စီးပွားရေးတိုးတက်လာခဲ့ရင် လျှပ်စစ် အသုံးက ဆတိုးနဲ့ ကိုတက်လာမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ များလေ လျှပ်စစ်သုံးတာများလေ ဖြစ်လာမှာဆိုတော့။ ရန်ကုန်အတွက် အနည်းဆုံး MW 10000 လောက် ရအောင် အစီအစဉ်လေး ဘာလေးရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပါ။ ဗြုန်းခနဲ မဟုတ်ဘူး ဆယ်နှစ် (သို့မဟုတ်) ဆယ့်ငါးနှစ် အတွင်းပေါ့။ ထားပါလေ။ ဒါတွေက လူကြီးတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
မန္တလေးကတော့ လျှပ်စစ်ကံကောင်းနေပါတယ်။ မန္တလေးနားမှာ ရေမြေသဘာဝ အရ ရဲရွာစက်ရုံလာဆောက်တယ်။ လျှပ်စစ်က 790MW တောင်ထွက်တယ်။ နောက် ဟိုးဖက် မူဆယ်နားမှာ ရွှေလီ-၁ စက်ရုံဆောက်တယ်။ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကို ပို့ဖို့ မန္တလေးနားက ဖြတ်သွားရတယ်။ နောက်ပြီး ဆည်တော်ကြီးတို့ ကင်းတားတို့လို စက်ရုံ အသေးလေးတွေ လည်း ရှိသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော့်အထင် မန္တလေးက နိုင်ငံတကာ မြို့တော်ဖြစ်ဖို့ သဘာဝက အခြေအနေ မပေးပါဘူး။ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရင်တော့ ရပါတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့သော် ရန်ကုန်လိုတော့ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာတယ် ဆိုရင်တောင်မှ ရန်ကုန်တို့ ထားဝယ်တို့ ကျောက်ဖြူတို့ မှာလို ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြီး တွေ မန္တလေးကို ၀င်ဖို့နည်းပါတယ်။ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလောက်ပဲ အားကိုးလို့ ရမှာပါ။ ပြောချင်တာက မြန်မာပြည်ကြီး ဗြုန်းခနဲ ဖွံ့ဖြိုးလာရင်တောင်မှ မန္တလေးကတော့ သူ့နှုန်းနဲ့သူ ပဲ တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ လျှပ်စစ်အသုံးကလည်း တအိအိပဲ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ နည်းနည်းပါးပါး တိုးနှုန်းမြန်လာတာတော့ ရှိမှာပေါ့လေ။
ကဲ... မီးဘာကြောင့်ပျက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပါဦးမယ်။ မီးဘာလို့ ပျက်လဲ ဆိုတော့ မလာလို့ပေါ့ဗျာ။ အဲလို ဖြေတာ အရှင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အတည်ပြောပါ့မယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေက တောထဲမှာ။ အဲဒီကနေ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကို ပို့နေရတာ။ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ငါးပုံနှစ်ပုံ(၄၀%)က မန္တလေးတိုင်းက ထုတ်တာပါ။ (ရဲရွာ၊ ပေါင်းလောင်း၊ ဆည်တော်ကြီး၊ ကင်းတား) နောက် ၂၀%လောက်ကို ရှမ်းတောင်နဲ့ ကယားက ထုတ်ပါတယ် (လောပိတ၁ နှင့် ၂၊ တီကျစ်၊ ကျိုင်းတောင်း၊ ဇော်ဂျီ ၁နှင့်၂) ရန်ကုန်နားက သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်ရုံတွေက ၂၀%လောက်ထုတ်ပါတယ်။ (အလုံ၊ လှော်ကား၊ ရွာမ၊ သာကေတ) ရှမ်းမြောက်က ၁၅%နှုန်း(ရွှေလီ-၁) နောက်ကျန်တာတွေက ပဲခူး၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ မွန် စတာတွေမှာ နည်းနည်းစီ ထုတ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်အသုံးကျတော့ ရန်ကုန်က ၄၅%နှုန်း မန္တလေးက ၁၀%ခန့် နေပြည်တော်က ၄%ခန့် သုံးပါတယ်။ အဲတော့ ရန်ကုန်မှာ သုံးဖို့ ဆွဲရတဲ့ လိုင်းတွေက ရွှေလီကနေ ဆို ရွှေလီ-မန်စံ-ရွှေစာရံ(မန္တလေးအနီး) ကနေတဆင့် ဘဲလင်း-သပြေ၀(မိတ္ထီလာအနီး) ဆက်သွား ပြီးတော့မှ သာစည်-ပျဥ်းမနား-တောင်ငူ-ကမာနတ်(ပဲခူးအနီး) ကနေပြီး ရန်ကုန်နားက ခွဲရုံတွေကို ၀င်ရပါတယ်။ ရဲရွာဓာတ်အားက ဘဲလင်းနဲ့ သပြေ၀မှာ လာပေါင်းပါတယ်။ ပေါင်းလောင်းဓာတ်အားက ပျဉ်းမနားမှာ လာပေါင်းပါတယ်။ လောပိတက ထုတ်တဲ့ ဓာတ်အားက သာစည်မှာ လောပိတ-တီကျစ်-ကလော-သာစည် ဓာတ်အားလိုင်းက လည်းကောင်း တောင်ငူမှာ လောပိတ-တောင်ငူဓာတ်အားလိုင်းကလည်းကောင်း တဆင့်လာပေါင်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ ရှိမှန်းမသိတဲ့ ကောင်တွေက လောပိတ-တောင်ငူနဲ့ ရွှေလီ-မန်စံ လိုင်းတွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် ထုတ်သမျှလျှပ်စစ်က ရန်ကုန်ကို ဘယ်လိုင်းက စီးလို့ စီးရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ လိုင်းတွေရဲ့ သယ်ဆောင်နိုင်အားတွေ အသေးစိတ်ပြောရင် ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူး။ သေချာတာကတော့ အဲဒီ လောပိတ-တောင်ငူနဲ့ ရွှေလီ-မန်စံ လိုင်းတွေ အဖျက်ခံရတဲ့အတွက် ရန်ကုန် မီးမပျက်ဖို့ သေမလောက် လုံးပန်းနေရပါတယ်။ ရန်ကုန်မပျက်တောင် အနည်းဆုံး တောင်ငူနဲ့ ပဲခူးလောက်မှာ ပျက်ပါတယ်။ မန္တလေးတို့လို မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာ ပျက်တာကတော့ ဓာတ်အားလိုင်းခပ်ငယ်ငယ်လေးတွေရဲ့ ယာယီအပြစ်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မီးအမြဲလာဖို့(လုံးဝမပျက်ဘဲ လာဖို့) ကတော့ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေကို တိုးဆောက်ရမယ်။ ရေအားချည်းပဲ ကတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ရေအားပဲ ဆောက်ရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ ခုလက်ရှိတောင် မလွယ်တာ။ နောင်လေးငါးနှစ် နှစ်ဆလောက် တက်လာမယ့် အချိန်ဆို လုံးဝ မလွယ်တော့ပါဘူး။ နောက်ဓာတ်အားလိုင်းတွေ သေချာတွက်ပြီးဆွဲရမယ်။ ဆွဲပြီးကာမှ ထုတ်ထားသလောက် မစီးနိုင်ရင် အလကားပါ။ နောက်ပြီး ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး အပိုင်းမှာ သေသေချာချာ လုပ်ရပါမယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ Technical Loss ဆိုတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ကြောင့်ပဲ ဆုံးရှုံးတာ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ Non-technical Loss ဆိုတဲ့ လူကြောင့် ဆုံးရှုံးတာပါ တော်တော်များနေတယ်လေ။ အဲဒါလေးတွေ သေချာလုပ်ရပါမယ်။ နောက် အရေးကြီးတာတစ်ခုက ဓာတ်အားစနစ် တစ်ခုလုံးကို Frequency and Voltage Control သေချာလုပ်ဖို့လိုပါမယ်။ အရေးပေါ်မှ ဟိုခေါ်ဒီဆက်လုပ်နေရတဲ့ လက်ရှိစနစ်ကနေ ဓာတ်အားစနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို တစ်နေရာတည်းက မောက်စ်ကလစ်ရုံနဲ့ ထိန်းနိုင်ဖို့ လုပ်နေကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
From : ဆင်ပေါက်Facebook ပေါ်တွင်နာမည်ကြီးအောင် သတင်းများတင်သာမက ကိုယ်တိုင်ရေချုိုး၊အိမ်သာသွားတာကိုပါတင်သော အကောင့်ပိုင်ရှင်များ ဥသြဆွဲသံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရသည်။ဟင်..မီးလောင်နေတာ ထင်တယ်။ FACEBOOK မှာ ဦးအောင်တင်လိုက်ဦးမှ..ဥသြသံက နောက်ထက် မကြားတော့။ နားကြားများမှားတာလား။ သေချာနားစွင့်နေလိုက်သည်။ ဖွင့်ထားသော သီချင်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဥသြသံကို တိုးတိုးလေး ကြားနေသလို။ မဖြစ်ချေဘူး။ မီးလောင်နေတယ်လို့ကြိုရိုက်ထားဦးမှ။ တော်ကြာ သူများဦးသွားဦးမယ်။ ဒါမျိုး ပို့စ် တင်တဲ့သူက ခပ်များများမလား။ စာကိုကြိုရိုက်ထားလိုက်သည်။ ကာဆာကို Post ပေါ်သို့ တင်ထားပြီးပြီ။ဘာသံမှ မကြားသေး။ ဒီမီးကလည်း လောင်စရာရှိလောင်လိုက်ရောပေါ့။လူကိုအသင့်အနေအထားပြောင်းလိုက်သည်။ အသင့်အနေအထားဆိုသည်မှာ နားကိုအစွမ်းကုန်စွင့်ထားပြီး လက်ညိုးက မောက်စ်နှိ်ပ်ရန် အသင့် ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ထဲကလည်း ဆုတောင်းရသေးသည်။မီးလောင်ပါစေ...မီးလောင်ပါစေ...FACEBOOK ပေါ် စာတွေပုံတွေ တင်ပြီး နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရသည်မှာ တော်တော်မလွယ်သည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကို ချောင်းနေရသည်။ ဖန်တီးရသည်။ ရှေ့တန်းရောက်ရဲဘော်လို ကင်မရာကို လယ်ဒီလုပ်ထားရသည်။လွှတ်တော်အမတ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပခုံးဖက်ပြီးလမ်းလျှောက်တာမြင်သည်။ သူ့ တူမလေးမှန်းသိလည်း ရိုက်သည်။စကပ်တိုနဲ့မော်ဒယ်မလေး တစ်ယောက်ထဲအေးအေးဆေးဆေး ပန်းခြံထဲမှာ ထိုင်ပြီးမုန့် စားနေသည်။ ဘယ်ချိန် အောက်စလွတ်မလဲ စောင့်ရိုက်ရသည်။ရေကန်ဘေးရှိ ရေမကူးရ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဖြုတ်ပစ်သည်။ ရေလာကူးကြမှ ဆိုင်းဘုတ်ပြန်ထောင်ပြီး တွဲရိုက်သည်။ဘီယာဆိုင်တွင် ဟင်းပွဲတွေအများကြီးမှာ၊ အရက်အကောင်းစားသောက်သော သူများဝိုင်းကို ခိုးရိုက်သည်။ ပြီးမှ ခပ်တည်တည်ပြန်တင်သည်။ပြောင်းဖူးကို ဌက်ပျောပင်ရှိ ဌက်ပျောခိုင်ကြားတွင်ချိတ်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲက မျက်စိမှုန်သောအဖွားကြီးများကို ခေါ်ပြသည်။ ပြီးမှ လူအုပ်ဖြင့် ဂန္ဘီယဆန်းကြယ်ပုံကို ရိုက်သည်။အပေါက်စောင့်လုံခြုံရေးကို ဖေ့ဘုတ်သတင်းထောက်ပါဟု ပြောဝင်သည်။ ပြီးမှ ကိုယ်တိုင် မီးခလုတ်တွေလိုက်ဖွင့်ပြီး ဖြုန်းတီးနေသောဌာနကြီးဟု ရိုက်သည်။ဘုန်းကြီးကျောင်းအိမ်သာဘေးသွားပြီး အလေးစွန့် သည်။ စည်းကမ်းမရှိသော ဘုန်းကြီးများခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရိုက်သည်။....................................ချောင်းရိုက်တာလူမိသွားလျှင် ရူးချင်ယောင်ဆောင်ရသည်။ ဖန်တီးထားသောခွင်ပျက်လျှင် အားကြီးစိတ်ဆိုးသည်။ အကြံတူလျှင် ရန်သူသတ်မှတ်သည်။သတင်းပေးလျှင် အထူးကျေးဇူးတင်သည်။ ၁၉၉ နဲ့ပါတနာဖွဲ့ လျှင် ကောင်းမလားစဉ်းစားနေသည်။အရေးကြီးတာ FACEBOOK တွင် နာမည်ကြီးဖို့ ဖြစ်သည်။Myanmar Express Read More
From : ဒေါက်တာဆင်ပေါက်ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာမိန်းကလေးဖြစ်ရတာကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီး အများစုက မိန်းကလေးများက ဂုဏ်ယူကြပါတယ်။"ယောကျာ်းတုိ့ဘုန်းလက်ရုံး မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံး" ဆိုသည့် စကားအတိုင်း ရှေးခေတ်မြန်မာမိန်းကလေး များဟာ ဆံထုံးလေးများဖြင့် မြင်တွေ့ရသည်မှာ ရင်သပ်ရူမောဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမူကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ များစွာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုမှာတော့ မြန်မာပြည်သူ/သားတွေ အထင်ကြီးလေးစားရပါသည်ဆိုသော အမေစု(ခ)ဒေါ်ညုကြောင့် အရင်ကတန်ဖိုးထားကာထိန်းသိမ်းလာသော အရာများ ပျောက်ပျက်လာတာကို များစွာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားကို ဘာလို့လက်ထပ်လဲ အမေစုတောင် နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းတာလေ သမီးတို့လည်း ယူမှာပေါ့ ဆိုပြီး ဖြစ်လာကုန်ပြီ။မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပြုန်း၊လူမျိုမှ လူမျိုးပြုန်းမယ် ဆိုတာ ကို မြန်မာမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လုံးဝ မမေ့သင့်ပါဘူး။အမေစုဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့လမ်းပြဦးဆောင်ကောင်းမူကြောင့် ပြည်ပမှာ လန်ထွက်နေတဲ့ ရွှေမြန်မာ မမများ Myanmar Express Read More
ပြည်တွင်း လယ်ယာ ကဏ္ဍတွင် ဗီယက်နမ် လုပ်ငန်းရှင်များမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ လာရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမည်
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ (ADem Capital) ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ ဆန်စပါး လုပ်ငန်း အသင်းမှ ဦးဆောင် ဖွဲ့ စည်းမယ့် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ အဲဂရီးဗစ်ဇစ်နက် ကော်ပိုရေးရှင်း
ကုမ္ပဏီနဲ့ လယ်ယာ ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး လုပ်ငန်း အသင်းမှာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက် အရ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ADemCapital ကုမ္ပဏီဟာ ပြည်တွင်း လယ်ယာ ကဏ္ဍ ဆန်စပါး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလို လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ နိုင်ဖို့ ကိုလည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့ ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား ခရီးစဉ်များ အတွင်း ဗီယက်နမ် နိုင်ငံကို ရောက်ရှိတဲ့ အချိန်မှာ နှစ်ဖက် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ MOUကို ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ လာရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု အတွက် ကိုတော့ ဇွန်လ အလယ်ပိုင်း လောက်မှာ နှစ်ဖက် တာဝန် ရှိသူများ ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
တည်ဆဲဥပဒေအချို့ ပြင်ဆင်ရာတွင် ငွေဒဏ်နှုန်းထားပါ တစ်ပါတည်းပြင်ဆင်
လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေအချို့ကို ပြင်ဆင်ရာမှာ ဒဏ်ငွေနှုန်းထားတွေကိုလည်း တစ်ပါတည်း ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဆီက သိရတယ်။ မပြင်ဆင်ရသေးတဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တချို့ ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ- မယားစရိတ်တောင်းရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေအရ အင်္ဂလိပ်ခေတ် လက်ထက်ကတည်းက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်လို့ အလွန်ဆုံး ကျပ် ၁၀၀ ပဲ ပေးရမယ်လို့ ပါတယ်။ အဲသည်ခေတ်တုန်းက ငွေကျပ် ၁၀၀ က မယားစရိတ် လုံလောက်ပါတယ်။ သည်ဥပဒေကို မပြင်ရသေးပေမယ့် တရားသူကြီးက သူ့ရဲ့ ချင့်ချိန်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းအရ လျော်ကန်သင့်မြတ်စွာ စီရင်ပေးနေတာတွေ ရှိတယ်လို့ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဥပဒေပညာရှင် ဒေါ်သန်းသန်းရီက ပြောပါတယ်။ သူက “ဥပဒေအရ ဘောင်ဝင်အောင်လို့ အခုပြင်နေတဲ့ ဥပဒေတိုင်းမှာ ဒဏ်ငွေနှုန်းထားတွေပါ ထည့်ပြင်နေပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ဆဲဥပဒေပေါင်း ၄၀၉ ခု ရှိတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သုတေသနပြုတဲ့ ဥပဒေပေါင်း ၃၆၉ ခု ရှိပါတယ်။ ပြင်ဆင်တာ၊ ဖြည့်စွက်တာတွေ ပေါင်းလိုက်ရင် ၄၀၉ ခုပါ။ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်ရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အဓိက လုပ်ငန်းတွေက ဥပဒေပြုမှုနဲ့ ဖျက်သိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်တာပါ။ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ အစားထိုးဖို့နဲ့ ဖျက်သိမ်းဖို့ ဥပဒေ ၁၄ ခုကို ကော်မရှင်က လေ့လာစိစစ် အကြံပြုထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ ဥပဒေသုံးခုကိုလည်း ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ စားသုံးသူများ ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေ၊ လက်ရှိ အဂတိလိုက်စားမှု ဥပဒေကိုပြင်ပြီး အသစ်ရေးဆွဲဖို့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဥပဒေသစ်တစ်မျိုးနဲ့ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဇုန် ဥပဒေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်စုဆောင်းနေတာလို့ ဥပဒေပြုရေးနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမောင်မောင်ဦးက “ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အထူးကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မှာလဲ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ တင်ပြပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေက အကြံပြုမှာ ဖြစ်တယ်” လို့ ရှင်းပြတယ်။ ဥပဒေတစ်ခုချင်း ပြင်ဆင်ရာမှာ ဥပဒေအကုန်လုံးရှိ ငွေဒဏ်တွေကို တစ်ပြေးညီပြင်မှာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဥပဒေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာနဲ့ ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွင် မဏိပူရပြည်နယ်၏ မြို့တော်နှင့် မန္တလေးကို တိုက်ရိုက်ဘတ်စ်ကား ထားရှိရေး အဆိုပြုသွားမည်
From : မန်းရတနာ
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်းသည် ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် လာရောက်ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကျော် ရွှေ့ဆိုင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး မဏိပူရပြည်နယ်၏ မြို့တော်အင်ဖာနှင့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတို့ကို ချိတ်ဆက်သော ဘတ်စ်ကားလိုင်း ထားရှိရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိန္ဒိယဘဏ် ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ် ထားရှိသွားရေး ကိစ္စရပ်များကို အဆိုပြုသွားမည်ဟု The Indian Express သတင်းစာမှ ဖော်ပြသွားသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သော အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် ရာဂျစ်ဂန္ဒီပြီးလျှင် မန်မိုဟန်ဆင်းသည် ပထမဆုံး လာရောက်မည့် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိန္ဒိယသို့ ပေးဆပ်ရမည့် ကြွေးမြီများကို ပြန်ပေးဆပ်ရန် အချိန်ကာလ တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အင်ဖာနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုက်ရိုက် ဘတ်စ်ကားလမ်းကို အိန္ဒိယနယ်စပ်မြို့ ဖြစ်သည့် မိုရေးမြို့ကိုဖြတ်ကာ ဖောက်လုပ်ရန်၊ လေကြောင်းလိုင်းများကိုလည်း လက်တလောတွင် တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ် ပျံသန်းရာမှ တိုးမြှင့်ပျံသန်းသွားရန်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အမီ အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသများမှ မြန်မာ့မီးရထားလမ်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ဆောင်သွားရန်တို့ ပါဝင်သည်။ အခြားအဆိုပြုမည့် အချက်များတွင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းသစ် ဖွင့်လှစ်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထမံသီနှင့် ရွှေဇာယီ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများကို တည်ဆောက်ရေး၊ တမူး-ကလေးဝ-ကမ်ဗို လမ်းပေါ်ရှိ တံတား ၇၆ စင်း အဆင့်မြှင့်ရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် The Union Bank of India နှင့် Bank of India တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်သွားရန်တို့ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက အိန္ဒိယသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်အမီ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလျံအထိ လက်ရှိ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ နှစ်ဆမြှင့်တင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ နှစ်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းဦးက ပြောပါတယ်။ သူက ‘နိုင်ငံတော်သမ္မတ ကိုယ်တိုင် ဂျပန်သွားတုန်းက J Power (Japanese Power) လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကို သွားလေ့လာပါတယ်၊ J Power စက်ရုံနဲ့ ညှိထားပြီးပါပြီ၊ ၆၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိတဲ့စက်ရုံ (ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ) ကို ရန်ကုန် အနီးတစ်ဝိုက်မှာ တည်ဖို့ လုပ်ထားပါတယ်၊ အလားတူပဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကုမ္ပဏီနဲ့လဲ ၅၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်စက်ရုံ သာကေတမှာ တည်မယ်’ လို့ပြောပါတယ်။ ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အများစုဟာ မန္တလေးအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းမှာပဲ ရှိတယ်။ အဲသည်ကရတဲ့ ဓာတ်အားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဒေသတွေကို ဖြန့်ဖြူးတဲ့အခါ မြို့တွေအကုန် ဖြတ်သုံးရတဲ့အတွက် ဗို့အား လေလွင့်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်လာကြောင်း အမေရိကန် ထုတ်ပြန်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူ့အခွင့်အရေးတွေ သိသိသာသာ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်နေကျ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန အခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပြီး ၊မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အခုနှစ်အတွင်း သိသာထင်ရှားတဲ့ တိုးတက်မှုတွေကတော့ လွှတ်တော်ပေါ်လာပြီး လွှတ်တော်ထဲ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ၀င်ရောက်ခွင့်ပြုလာတာ၊ အမြဲတန်း အစိုးရလုပ်သမျှ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ မှတ်ပုံတင်နိုင်အောင် ဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ၊ ရာနဲ့ချီ တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးတာ၊ စာပေဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှုတွေကို လျှော့ပေါ့ပေး လာတာ၊ အတိုက်အခံ အမြင်ကွဲပြားသူတွေရဲ့ သဘောထားအမြင်ဖော်ပြနိုင်အောင် လွတ်လပ်ခွင့် ပေးတာ၊ နိုင်ငံသားတွေ ပြည်တွင်းပြည်ပ သွားလာနိုင်အောင် ကန့်သတ်မှု အချို့ ဖြေလျှော့ပေး တာ တွေ မြန်မာအစိုးရက ထူးထူးချွန်ချွန် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီလထဲမှာပဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ထူးချွန်မှု ကို အသိအမှတ် ပြုတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက စီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း အခြားဥရောပနိုင်ငံများကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ညှိနိုင်းပြီး စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Express
အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနမှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
အများပြည်သူ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဓာတ်အားပေးစက်များဖြင့် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူး ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနမှ ကြေညာ ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နွေရာသီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းနေချိန်တွင် အများပြည်သူ များ အတွက် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများသည့် နေရာများတွင် သောက်သုံးရေ ရရှိရေးနှင့် ညဘက် မီးရရှိရေးတို့အတွက် လက်ရှိ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ပေးလျှက်ရှိသည့် ဓာတ်အားပေးစက်များ အပြင် အောက်ပါဓာတ်အားပေးစက်များ ထပ်မံဝယ်ယူဖြည့်တင်း၍ တိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးပေးလျှက် ရှိပါသည်- (က) ရန်ကုန်မြို့ (၁) ၅၀၀ ကေဗွီအေ - (၄)လုံး ၂၀၀၀ ကေဗွီအေ (၂) ၃၅၀ ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၃၅၀ ကေဗွီအေ (၃) ၃၄၀ ကေဗွီအေ - (၂)လုံး ၆၈၀ ကေဗွီအေ (၄) ၃၁၅ ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၃၁၅ ကေဗွီအေ (၅) ၂၅၀ ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၂၅၀ ကေဗွီအေ (၆) ၁၅၀ ကေဗွီအေ - (၂)လုံး ၃၀၀ ကေဗွီအေ စုစုပေါင်း (၁၁)လုံး ၃၈၉၅ ကေဗွီအေ ( ခ ) မန္တလေးမြို့ (၁) ၅၀၀ကေဗွီအေ - (၄)လုံး ၂၀၀၀ ကေဗွီအေ (၂) ၃၁၅ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၃၁၅ ကေဗွီအေ (၃) ၃၀၀ကေဗွီအေ - (၁၀)လုံး ၃၀၀၀ ကေဗွီအေ (၄) ၂၅၀ကေဗွီအေ - (၂)လုံး ၅၀၀ ကေဗွီအေ (၅) ၂၀၀ကေဗွီအေ - (၂)လုံး ၄၀၀ ကေဗွီအေ (၆) ၁၀၀ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၁၀၀ ကေဗွီအေ စုစုပေါင်း (၂၀)လုံး ၆၃၁၅ ကေဗွီအေ ( ဂ ) ပြည်မြို့ (၁) ၅၀၀ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၅၀၀ ကေဗွီအေ (၂) ၁၀၀ကေဗွီအေ - (၂)လုံး ၂၀၀ ကေဗွီအေ (၃) ၂၀ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၂၀ ကေဗွီအေ (၄) ၁၅ကေဗွီအေ - (၁)လုံး ၁၅ ကေဗွီအေ စုစုပေါင်း (၅)လုံး ၇၃၅ ကေဗွီအေ (ဃ) မုံရွာမြို့ ၁၀၀ကေဗွီအေ - (၂)လုံး ၂၀၀ ကေဗွီအေ ထို့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံ Caterpillar Co,.ltd မှ2mw မီးစက် (၁၀)လုံးကိုလည်း လေယာဉ်ဖြင့် တင်ပို့ရန် စီစဉ်နေပြီး တစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာပြည်ကို ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရောက်ရှိပါကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်သောနေရာများသို့ ဆက်လက်ပေးပို့၍ ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေး ပို့သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံ၍လည်း ဓာတ်အားပမာဏ 1 MW ထွက်ရှိသော ဒီဇယ်ဓာတ်အားပေး စက်(၆)လုံးကိုလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ မှာယူ၍ တစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာပြည်အရောက် ပို့ပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်းနှင့် General Electric Co,.ltd မှလည်း ၂၅ မဂ္ဂဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်သော Gas Turbine (၂)လုံးကို ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး ၄င်းစက်(၂)လုံးမှာ မြန်မာပြည်သို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ Myanmar Express
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှု မမှန်ပါက အကြောင်းကြား နိုင်
အခုနှစ် နွေရာသီမှာ ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်း နေတာကြောင့် ပြည်သူလူထုကို အုပ်စု ၃ စုခွဲပြီး အလှည့်ကျ ဓာတ်အား မျှပေး လျက်ရှိရာ မိမိတို့
ဓာတ်အား ရရှိမယ့်အချိန်မှာ မမှန်ဘဲ အဆင် မပြေမှုများ ရှိပါက သတ်မှတ် ဖုန်းတွေကို ဆက်သွယ် အကြောင်းကြား နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုအုပ်စု ၃ စုနဲ့အလှည့်ကျ ဓာတ်အားမျှပေး နေမှုများကို ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပေးရေး အဖွဲ့၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှာ အုပ်စု အသီးသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ရပ်ကွက်များရဲ့ အသေးစိတ် စာရင်းများနဲ့ အလှည့်ကျ ဓာတ်အား ရရှိမယ့် အချိန်ဇယား တွေကို ကြေငြာထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဓာတ်အား ရရှိမယ့် အချိန်များမှာ မပျက်မကွက် ရရှိရေး အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရေး အဖွဲ့ ရုံးချုပ်၊ ခရိုင်နဲ့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများမှာ တာဝန်ရှိ သူများက ၂၄ နာရီ စောင့်ကြပ် ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိရာ အဆင်မပြေမှုများ ရှိလည်း ဖော်ပြပေး သွားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို အချိန်မရွေး အကြောင်းကြား နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဆက်သွယ် နိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေ ကိုတော့ ခရိုင် အလိုက်၊ မြို့နယ် အလိုက် ခွဲခြားပြီး သတ်မှတ် ထားသလို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်မြို့နယ် တွေရှိ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ အထူး စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ တွေကို တာဝန်ပေးအပ် ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားသင့်တော်သည့်အချိန်တွင် သမ္မတက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးမည်ဟုဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ပြောကြား
ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား သင့်တော်သည့်အချိန်တွင် သမ္မတက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးမည်ဟု လွန်ခဲ့သော သီတင်းပတ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်နှင့်အတူ မေလ ၁၇ ရက်နေ့က ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပူးတွဲသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။ “အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ လ၊ ၁၃ လအတွင်းမှာ သမ္မတက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် လေးကြိမ် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကျဉ်းသားပေါင်း ၂၈,၀၀၀ လောက်ကို လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီက စာရင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဆီကရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စာရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလမှာ ပေးခဲ့တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အပြီးမှာ ဒီစာရင်းတွေထဲမှာ ပါတဲ့သူ အတော်များများ လွတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်” ဟု လက်ရှိ ကျန်ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းချက်ကို ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ဖြေကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရင်းများမှာ အချို့မှာ အကျဉ်းကျနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ထားသူများဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ သိရှိခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်ကလည်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် လေးစားလိုက်နာရန် အားပေးသည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေးနှင့် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးများကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရနှင့် ဆက်လက် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားသည်။ “နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအဖြစ် ဆက်ရှိနေတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ပြန်လွှတ်ပေးတာကို၊ ပြီးတော့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို အားပေးတဲ့ ဥပဒေစည်းမျဉ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အလေးပေး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်တာကိုလည်း ကျွန်မတို့ မြင်တွေ့ချင်ပါတယ်” ဟု ကလင်တန်က အဆိုပါ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
From : လူထုစိန်ဝင်း
လူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံပြီး စရိုက်အထွေထွေကို လေ့လာခွင့်ရတဲ့ သူတွေအဖို့ စာရေးတဲ့နေရာမှာ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
စိတ်တိုတတ်ရင် ၀တ္ထုဖတ်.လူ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်တော့ စာရေးတဲ့အခါမှာ ယထာ ဘူတကျအောင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု သာမန်ထက်ပိုပြီး လုပ်နိုင်တယ်။ လူ့စရိုက်သဘာဝကို သဘောပေါက်နားလည်နိုင်တဲ့အတွက် သည်းခံစိတ်ပိုရှိလာပြီး အလွယ်တကူ နဲ့ ခွင့်လွှတ်လာနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်တိုလွယ်တဲ့သူတွေ အထိမခံ ကြွေပန်းကန်စိတ်ရှိသူတွေနဲ့ အခဲမကြေ တတ်သူတွေ ၀တ္ထုတွေ များများဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်တယ်။
မုန်းတီးတာထက် သနားတာပို.ပုထုဇဉ် မှန်သမျှ စိတ်တိုတတ်၊ ဒေါသထွက်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်များတဲ့အတွက် လူ့စရိုက်သဘာဝတွေ ကို သဘောပေါက်သူကဒေါသဖြစ်ရင်လည်း ခဏနဲ့ပြေပျောက်သွားတယ်။ မုန်းတီး စက်ဆုပ်စရာလူမျိုးကိုတွေ့ရင် လည်း အဲဒီလူမျိုးကို မုန်းတီးတာထက် သနားစရာ၊အသိဥာဏ်နုံနဲ့သူအဖြစ် အလွယ်တကူ ခွင့်လွှတ်လိုက်နိုင်တယ်။ ကျောင်းသားတပည့်တွေထဲမှာလူတိုင်းဝေးဝေးကရှောင်တဲ့သူတစ်ယောက် ရှိဖူးတယ်။ သူက စိတ်ရင်းသဘောထား ကောင်းပေမယ့် အငြင်းသန်ပြီး စကားကြီးစကားကျယ်တွေပြောလွန်းတဲ့အတွက် သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ လူတိုင်း ဝေးဝေး က ရှောင်ကွင်းသွားတတ်ကြတယ်။
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်.သူက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်နဲ့ စာတွေတော့ဖတ်တယ်။ ပီတာဒရပ်ကားတို့၊ ဖူကူးယားမားတို့၊ ဒီဘိုးနိုးတို့၊ စတစ်ဂလစ် တို့၊ ဖရိုက်မင်းတို့ စာအုပ်မျိုးတွေဖတ်လေ့ရှိတယ်။ ၀တ္ထုတွေ ဘာတွေတော့ မဖတ်ဘူး။ ဖတ်ပြီးရင် သူ့အကျင့်က ဖတ်ခဲ့သမျှကို လူတကာ လိုက်ပြောတယ်။ တစ်ဖက်သား စိတ်ဝင်စားမှု ရှိတာ / မရှိတာ အလေး မထားဘူး ။ သူပြောချင်တာ မပြီးမချင်း ဆက်ပြောတာပဲ။ ကြာတော့ ဘယ်သူမှ သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ သူ့မြင်တာနဲ့ ဝေးဝေးကရှောင်ကြတော့တယ်။ သူက ဒါတွေ မသိဘူး။ သူ့အချိုး မပြင်ဘူး ။ နောက်ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား အသစ်တွေဝိုင်းမှာ ထိုင်ပြီး သူ့လက်ချာတွေ ပေးမြဲပေးနေလေ့ရှိတယ်။
စပါးပင်မြင်ဖူးရဲ့လား.တစ်ခါတော့ သူ ကောင်းကောင်းခံလိုက်ရတယ်။ နယ်က ကျောင်းသူတစ်ယောက်က သူ့ကို ပညာပေးလိုက်တာ။ စကားဝိုင်းမှာ သူက ထုံးစံအတိုင်း ဖရိုက်မင်းတွေ၊ စတစ်ဂလစ်တွေပြောပြီး ဒီလို ပညာရှင်တွေ ရေးတဲ့စာတွေ ဖတ်ရကောင်းမှန်းမသိကြလို့ တိုင်းပြည်ကြီး မတိုးတက်တာ။ ဒီလို ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ရယူပြီးစီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲသင့်တယ်၊ ဘာညာနဲ့ ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။ အဲဒီကျောင်းသူက ... " ရှင့် ပညာရှင်ကြီးတွေ စပါးပင်ကို မြင်ဖူးရဲ့လား၊ ဂျုံပင်ကြားကနေပြီး ဂျုံစားတဲ့လူတွေက စပါးစိုက်တဲ့နိုင်ငံက လူတွေကို ဘာအကြံကောင်း ပေးနိုင်မှာလဲ " လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ သူပါးစပ် အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။
လက်တွေ့လုပ်ငန်းထဲက သူ..အဲဒီကျောင်းသူက စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်က ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့အပြင် MBA ဘွဲ့လည်း ရထားသေးတယ်။ တစ်ချိန်လုံး အဲဒီ ဆရာမက သူ့ကို လက်ချာပေးနေတာ သူငြိမ်ပြီးနားထောင်နေရတယ်။ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ ဘယ်ပြောနိုင်မှာလဲ။ သူက စာအုပ်တွေထဲကဟာလောက် ပြန်ပြောတတ်တာ။ ဟိုက လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲက စိုက်ပျိုးရေး ဆရာမ ဖြစ်ရုံမက MBA လို ဘွဲ့မျိုးရထားတာ ဆိုတော့ စိုက်ပျိုးရေးတို့ စီးပွားရေးတို့အကြောင်း ကောင်းကောင်းကြီး ပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်။ နောက်ရက်တွေမှာတော့ အတန်းထဲမှာ အဲဒီကျောင်းသူရှိနေရင် .. သူ သိပ်ပြီးလေလုံးမထွားရဲတော့ဘဲ ငြိမ်နေတော့တယ်။
မြေကြီးရှိတိုင်း စိုက်လို့ရတာ မဟုတ်..စာအုပ်ကြီးသမားနဲ့ လက်တွေ့သမား ဘယတူနိုင်မှာလဲ။ လက်တွေ့လုပ်နေသူကသာ အခြေအနေမှန်ကို အသိနိုင် ဆုံးပေါ့။ စာအုပ်ကြီးတွေက ဘယ်လိုရေးပြီး ဘယ်လိုသင်ထားထား ကိုယ့်နိုင်ငံလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီမှ အသုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်။ သူတို့က သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သဘာဝတွေအပေါ် အခြေခံပြီး ရေးသားပြုစု ထားကြာတွေဖြစ်တော့ သူတို့နိုင်ငံအတွက်တော့ ရာနှုန်းပြည့် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်လို နိုင်ငံအတွက် တော့ သူတို့ရေးသားချက်တွေဟာ 25%တောင် အသုံးဝင်ချင်မှ ၀င်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည် မှာတောင် မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသ အတွက် သင့်တော်တဲ့ နည်းစနစ်က အထက်အညာက မိုးခေါင်ရေရှား ဒေသအတွက် အသုံးတည့်ချင်မှ တည့်မှာပေါ့ ။ မြေကြီးတိုင်း စိုက်ချင်ရာစိုက်လို့ ရနိုင်တာမျိုးမှ မဟုတ်တာ။
ကိုဖိုးသိတွေ..မြို့ပေါ်က ပညာတတ်တွေ အများစုဟာ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး သိပ်ဟုတ်လှပြီလို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဘာမဆို သူတို့ မှ ကိုဖိုးသိ (Mr.Know All) ဆိုတဲ့အထင်ရောက်ပြီး တခြားလူတွေ ... အထူးသဖြင့် တောကလူတွေကို ငုံ့ကြည့်လေ့ရှိတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်ဖို့လို ..နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်တွေရဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေဟာ သူတို့နိုင်ငံ၊ သူတို့လူမျိုးတွေအတွက်တော့ အကျိုးရှိမှာပါ ။ သူတို့ နဲ့ ပထ၀ီ အနေအထား၊ ရာသီဥတု၊ ဓလေ့ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု အခြေအနေ စတဲ့ နေရာတွေမှာ ၀င်ရိုးစွန်းနှစ်ဖက်လောက် ကွာဟချက်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ သိပ်ပြီး အသုံးဝင်လိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး။ သူတို့ စာအုပ်ကြီးတွေကို နမူနာအဖြစ် ထားပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတု၊ ရေမြေ အနေအထား၊စီးပွားရေး အခြေအနေတို့နဲ့ ကိုက်ညီအောင် မြန်မာလူမျိုး ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် စာအုပ်စာတမ်းတွေ ရေးသား ပြုစုကြရပါလိမ့်မယ်။ စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆင်းတွေ၊ စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ဆင်းတွေ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဆင်း တွေ ကျွန်တော့်ဆီမှာ မနည်းပါဘူး။ ဒီကျောင်း ဆင်းတွေ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ သုတေသနပြုပြီး စာအုပ်တွေရေးနိုင် အောင် ၀ိုင်းဝန်းဖန်တီးပေးသင့်ကြပါတယ်။ အခုလို နိုင်ငံခြားသားတွေရေးတဲ့ စာအုပ်တွေ အားကိုး အားထား ပြုနေရုံနဲ့တော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်။ ပြည်တွင်းဖြစ် ပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေ ပေါပေါ များများကြီး ထွက်လာမှ တိုင်းပြည်အမှန်တကယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပါ။ ပြည်တွင်းဖြစ် ပညာရှင်တွေ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ မနည်းပါဘူး။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ (၉) မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ် (၂၆) တွင် ပါတီရုံးချုပ်တည်ရှိသော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမီမိုကရေစီအီအဖွဲ့ချုပ် က နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံ တင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် ၂၃-၅-၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် လျှောက်ထားလာပါသည်။ ယင်းသို့ လျှောက်ထား ရာတွင် ပါတီအမည်၊ အလံနှင့် တံဆိပ်တို့ကို ဖော်ပြ ပါအတိုင်း အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလာပါ သည်။ယင်းအဖွဲ့အစည်းက အသုံးပြုမည့် ပါတီအမည်၊ အလံနှင့် တံဆိပ်တို့ကို ကန့်ကွက်လိုက ယခုကြေညာ သည့်နေ့မှစ၍ ခုနစ်ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လာရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ပါ ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်း ဥပဒေများ ၁၄ (ဃ) အရ အများသိစေရန် ကြေညာ အပ်ပါသည်။Myanmar Express
မြို့ပတ်ရထား စီမံကိန်းများ အဆင့် မြှင့်တင်ရန် ယခုလပိုင်း အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များ လာရောက် မည်
ရထား ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက် အရ ရန်ကုန်မြို့ မြို့ပတ် ရထား စီမံကိန်း အဆင့်မြှင့် တင်မှုများ ကူညီများ ပေးသွား
နိုင်ရန် အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင် အဖွဲ့ဟာ လာရောက် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အဖွဲ့ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရမှ စေလွှတ်တဲ့ ပညာရှင် အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထား စီမံကိန်း အဆင့်မြှင့်တင် မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထား စီမံကိန်းဟာ ရထား ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ ထံသို့ လွှဲပြောင်း ပေးဖို့ စီစဉ်ထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ စီစဉ်မှုကိုတော့ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များထက် ပြည်ပနိုင်ငံ အချို့မှ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိပြီး လာရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ လေ့လာမှု များလည်း ပြုလုပ်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် ခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် မှာလည်း ဂျပန် နိုင်ငံမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တွေကို မြို့ပတ် ရထား စီမံကိန်း အပါအ၀င် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်မှုများ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြို့ပတ်ရထား စီမံကိန်းဟာ ပြည်ပ နိုင်ငံများမှ စိတ်ဝင်စားမှုများ ရှိပေမယ့် ယခုလက်ရှိ မှာတော့ လေ့လာမှု တွေသာ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ ဂျပန် နိုင်ငံမှ ပညာရှင် အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေ့လာမှု အနေနဲ့ မြို့ပတ် ရထား စီမံကိန်း အပြင် သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းနဲ့ လောပိတ ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကိုလည်း လေ့လာ သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောပိတ ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှာ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ တွေကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ယခင်က ကူညီပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း မှာတော့ ရပ်နား ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဂျပန်နိုင်ငံမှ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ရပ်နား ထားတဲ့ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ကူညီမှု တွေလည်း ပြန်လည် ပေးအပ် သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ မြို့ကြီးများသို့ သွားရောက် လေ့လာဆွေးနွေးနေ
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီသည် ယခုလအကုန် အထိ မြို့ကြီးများသို့ သွားရောက် လေ့လာ ဆွေးနွေးလျက် ရှိကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ ရုံးတွင် ကျင်းပသော ဆွေးနွေးပွဲမှ သိရသည်။
တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို အချင်းချင်း အပြန်အလှန် နားလည်မှု ပိုမို တည်ဆောက်နိုင်ရန်၊ စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပိုမို ဖြစ်ထွန်း ဖော်ဆောင် နိုင်ရန်၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဆိုင်ရာများ လေ့လာရန်၊ ဘာသာစာပေ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို လေ့လာရန်နှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ လူမှု စီးပွားဘဝများကို နယ် မြေဒေသ ကွင်းဆင်း လေ့လာရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ကော်မတီ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်က ယနေ့ နံနက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးသိန်းဇော် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်) ဦးဆောင်သော ကွင်းဆင်း လေ့လာရေး အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်၊ စစ်တွေ၊ မြစ်ကြီးနား၊ မန္တလေး၊ မုံရွာ နှင့် ဟားခါးသို့ သွားရောက် မည် ဖြစ်ပြီး ဦးဆိုင်ပေါင်းနပ် (အမျိုးသား လွှတ်တော်) ဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ ရန်ကုန်၊ ထားဝယ်၊ ဘားအံ၊ မော်လမြိုင်၊ တောင်ကြီးနှင့် လွိုင်ကော်တို့ သို့ သွားရောက် မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ခရီးစဉ် အပြီးတွင် နေပြည်တော်၌ ပြန် လည် တွေ့ဆုံကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကော်မတီ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်က နယ်မြေဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားများ ဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ် မှုခိုင်မာရေး၊ နိုင်ငံတော်၏ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး စသည့် အဓိက အချက် ၃ ချက်ကို ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးများ အပါအဝင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
ယောကျာ်းများ ထိပ်ပြောင်ရခြင်း အကြောင်းရင်း တွေ့ပြီ
From : Health Digest ယောကျာ်းများ ထိပ်ပြောင်ရခြင်း အကြောင်းရင်း တွေ့ပြီ အမျိုးသားများ ထိပ်ပြောင် သည့်ပြဿ နာဟာ ရိုးရိုးမျက်စိဖြင့် မမြင်ရ သော အလွန်သေးငယ်သည့် ဆံပင် ထုတ်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆံပင်အသစ်ဖြစ်စေသော ပင်မကလာပ်စည်းထဲတွင် ချို့ယွင်းချက် များ ဖြစ်ပေါ် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤချို့ယွင်း ချက်ကို ပြုပြင်ပေး ခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဆံပင်ပြန်ပေါက်လာစေနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လိမ်းဆေးတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ထုတ်ပြီး ဦးရေပြားပေါ် ဆိုးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ပင်မကလာပ်စည်းများမှ ကျန်းမာသောဆံပင်များ ပေါက်လာနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။ ထိပ်ပြောင်ရခြင်း ဖြစ်စဉ်ရဲ့အသေးစိတ်အတိအကျကို မသိရသေးသော်လည်း တက်စတိုစတီရုန်း ဟူသည့် ယောကျာ်းဟော်မုန်း ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြသည်။ Myanmar Express
အများပြည်သူ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ဓါတ်အားပေးစက်များ ဖြည့်တင်း၍ ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိ
နွေရာသီ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းနေချိန်၌ ဓါတ်အားပြတ်တောက်မှုများသည့် နေရာများတွင် အများပြည်သူများ သောက်သုံးရေရရှိရေးနှင့် ညဘက်မီးရရှိရေးတို့အတွက် လက်ရှိ ဓါတ်အားထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိသည့် ဓါတ်အားပေးစက်များအပြင် ဓါတ်အားပေးစက်အသစ်များ ထပ်မံဝယ်ယူဖြည့်တင်း၍ တိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၅၀၀ ကေဗွီအေ လေးလုံး၊ ၃၅၀ ကေဗွီအေ တစ်လုံး၊ ၃၄၀ ကေဗွီအေ နှစ်လုံး၊ ၃၁၅ ကေဗွီအေ တစ်လုံး၊ ၂၅၀ ကေဗွီအေ တစ်လုံးနှင့် ၁၅၀ ကေဗွီအေ နှစ်လုံး စုစုပေါင်း ဓါတ်အားပေးစက် ၁၁ လုံးဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၃၈၉၅ ကေဗွီအေကို လည်းကောင်း၊ မန္တလေးမြို့တွင် ၅၀၀ ကေဗွီအေ လေးလုံး၊ ၃၁၅ ကေဗွီအေ တစ်လုံး၊ ၃၀၀ ကေဗွီအေ ၁၀ လုံး၊ ၂၅၀ ကေဗွီအေ နှစ်လုံး၊ ၂၀၀ ကေဗွီအေ နှစ်လုံးနှင့် ၁၀၀ ကေဗွီအေ တစ်လုံး စုစုပေါင်း ဓါတ်အားပေးစက် အလုံး ၂၀၊ ၆၃၁၅ ကေဗွီအေကို လည်းကောင်း၊ ပြည်မြို့တွင် ၅၀၀ ကေဗွီအေ တစ်လုံး၊ ၁၀၀ ကေဗွီအေ နှစ်လုံး၊ ၂၀ ကေဗွီအေ တစ်လုံးနှင့် ၁၅ ကေဗွီအေ တစ်လုံး စုစုပေါင်း ဓါတ်အားပေးစက် ငါးလုံးဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၇၃၅ ကေဗွီအေကို လည်းကောင်း၊ မုံရွာမြို့တွင် ၁၀၀ ကေဗွီအေ ဓါတ်အားပေးစက် နှစ်လုံးဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၂၀၀ ကေဗွီအေကို လည်းကောင်း တိုးမြှင့်ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံ Caterpillar Co.,Ltd မှ 2mw မီးစက် ခြောက်လုံးကိုလည်း လေယာဉ်ဖြင့် တင်ပို့ရန် စီစဉ်လျက်ရှိရာ တစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရောက်ရှိပါက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်သော နေရာများသို့ ဆက်လက်ပေးပို့၍ ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူး ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။ ၄င်းအပြင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ မှာယူထားသော 1mw ဒီဇယ်ဓါတ်အားပေးစက် ခြောက်လုံးကို တစ်ပတ်အတွင်း မြန်မာပြည်အရောက် ပို့ပေးနိုင်ရေးနှင့် General Electric Co.,Ltd. မှ ဝယ်ယူသည့် ၂၅ မဂ္ဂါဝပ် Gas Turbine နှစ်လုံးကို အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင်၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်
၁။ ဒေါက်တာဦးမြင့်၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ရှင်းလင်းပြောကြားရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊၂။ ယင်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာ ဒေါက်တာဦးမြင့်မှ ယင်း၏ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒအလျောက် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သမ္မတရုံးအနေဖြင့် ကြိုတင်သိရှိခြင်းလည်း မရှိ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ သဘောထား တစ်စုံတစ်ရာ လည်း ထင်ဟပ်ခြင်းလည်း မရှိပါကြောင်း၊၃။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အစဉ်အလာဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ထွန်းပြောင် လာစေရန် တည်ဆောက်ထူထောင်ရေးမှာ ဒေါက်တာဦးမြင့်နှင့်တစ်ကွ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ ဟောင်း သစ်များ၊ ဆရာ/ဆရာမ ဟောင်းသစ်များ လိုလားတောင့်တကြသကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ကလည်း အထူးလိုလားဆန္ဒ ရှိသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါကြောင်း၊ စင်စစ်၌ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တက္ကသိုလ်အားလုံးကို နိုင်ငံတကာအဆင့်နှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်သည့် တက္ကသိုလ်များ ဖြစ်လာစေလိုသည့် ဆန္ဒ ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေ ဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းကိုသာ အထူးတလည် ဦးစားပေး တည် ဆောက်ပြီး ကျန်တစ်ပြည်လုံးရှိ တက္ကသိုလ်များကို မျက်ကွယ်ပြုထား၍ မဖြစ် နိုင်ပါကြောင်း၊၄။ အလျဉ်းသင့်၍ နိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ် အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းနေမှုများကို မိမိသိသမျှ တင်ပြလိုပါကြောင်း၊ မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းက တောင်ကြီး တက္ကသိုလ်တွင် အမျိုးသားပညာရည် မြင့်မားရေး (အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ) နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ/ဆရာမ များက စာတမ်းပေါင်း ၇၁ စောင် တင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း၊ ယင်းစာတမ်းများမှာ တက္ကသိုလ်များ၌ ပညာရည်မြင့်မားရေးအတွက် ဆရာ၊ ကျောင်းသား၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ၊ ငွေကြေး စသည့်ကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်း ပြုပြင်နိုင်ရန် လက်တွေ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သင် ကြားနေသော ဆရာများကိုယ်တိုင် လိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်မှု Need Analysis နှင့် အရည်အသွေး စိတ်ချသေချာအောင် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ှQuality Assurance Process များကို လေ့လာသုံးသပ်အကြံပြုထားသည့် စာတမ်းများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းစာတမ်းများမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလာဒ်များအပေါ် မူတည်၍ လုပ်ငန်းစီမံချက် Action Plan များ၊ မဟာဗျူဟာနှင့် နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ရေးဆွဲကာ နိုင်ငံတကာ အကူအညီများပါ ရယူပြီး လိုအပ်သည့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၅။ ပညာရည်မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့ ချက်ချင်းပြောင်းပြန် ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ကြောင်း၊ အချိန်ယူကာ ငွေကြေးများစွာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ဆောင်ရွက်ရသည့် လူသားစွမ်းရည် ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်က ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးစရိတ်ကို ယခုနှစ်မှစ၍ နှစ်ဆတိုး သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ထိုမျှနှင့် မလုံလောက်နိုင် သေးကြောင်း၊ အစိုးရတစ်ခုတည်းနှင့်လည်း ပြီးပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်နိုင် မည် မဟုတ်၍ Private Public Partnership အသွင်ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့် ပြည်သူများပါ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုလည်း ရယူသွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၆၊ တက္ကသိုလ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံပိုင်အစိုးရတက္ကသိုလ်များ သက်သက်ပုံစံမှ ကြီးကြပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မည့် ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲသွားရန် ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံရပ်မိရပ်ဖ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် မိမိတို့ဒေသရှိ တက္ကသိုလ်များ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ကြိုးပမ်းခွင့် ရကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၇၊ တက္ကသိုလ်များ ပညာရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ယခုဆောင်ရွက်နေသော မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အရည် အသွေး မြှင့်တင်ပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ရေး Training for Trainers ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာကောင်းမှ တပည့်ကောင်းများ မွေးထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်၍ ဆရာ/ဆရာမများ ကို အရေအတွက်မှ အရည်အချင်းသို့ ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် နိုင်ငံတကာရှိ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ တက္ကသိုလ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိကတက္ကသိုလ်ကြီးအချို့တွင် သုတေသနနှင့် နည်းပြမွေးထုတ် လေ့ကျင့်ရေး စံပြပညာရေး ဗဟိုဌာနများအဖြစ် ဦးတည် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ရန်ကုန်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များကို ယင်း Center of Excellence များအဖြစ် စံနမူနာပြ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ မန္တလေး တက္ကသိုလ်ကို CEO အဖြစ် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ John Hopkins တက္ကသိုလ်၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်များ၊ ဥရောပမှ တက္ကသိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ဂျွန်ဟော့ကင်း တက္ကသိုလ်ဆိုလျှင် မြန်မာဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ကာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊၈။ ယခု အိတ်ဖွင့်ပေးစာပါ တင်းနစ်ကွင်းကိစ္စများလည်း တင်ပြလိုပါကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခြားအကြောင်းများကြောင့် ယခင်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် အားကစားလုပ်ငန်းများ တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့ သည့် ငါးနှစ်ခန့်မှစ၍ တက္ကသိုလ်များတွင် အားကစားလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည် မြှင့်တင်အားပေးခဲ့ကြောင်း၊ တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ယခင် ရှိရင်းစွဲ တင်းနစ်ကွင်း ၉ ကွင်းအပြင် မြို့တော်စည်ပင်က ကွင်းသစ် ၆ ကွင်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့၍ ၁၅ ကွင်း ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊ အားကစားရုံနှင့် ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းများမှာလည်း Public Private Partnership ပုံစံဖြင့် ပုဂ္ဂလိကနှင့်တွဲဖက်၍ ပြန်လည်ထူထောင်ထားခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ် ဆရာ/ ဆရာမ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် အခမဲ့(သို့မဟုတ်) အထူး ချိုသာသော လစဉ်ကြေးဖြင့် ကစားနိုင်ခဲ့ကြကြောင်း၊၉။ ယခု အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် တင်းနစ်ကွင်းများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင် မြှင့်တင် တည်ဆောက်မည်ဆိုခြင်းမှာလည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပိုင် တင်းနစ်ကွင်းများအား ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များလက်သို့ ၀ ကွက် အပ်လိုက်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ အားကစားပြိုင်ပွဲ ပြီးလျှင် တက္ကသိုလ်ပိုင် ကွင်းများအဖြစ်သာ ရှိပြီး တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ/ဆရာမ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသာ ကစားကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်မှ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ကွင်းသစ် အဆောက်အအုံသစ်များ ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အားကစားရုံကို စားသောက်ဆိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်မည် ဟု ဆိုခြင်းမှာလည်း နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းသာ ဖြစ်ဖွယ် ရှိကြောင်း၊ အားကစားပြိုင်ပွဲကာလတွင် အားကစားသမားများအတွက် စားသောက်ခန်းမအဖြစ် ယာယီ အသုံးပြုခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲ ပြီးလျှင် အားကစားရုံအဖြစ်သာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဤသို့ နိုင်ငံတော်မှ စိတ်ကောင်း စေတနာထား၍ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကို နားလည် သဘောပေါက်ကြစေလိုကြောင်း၊ နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည် ဟုလည်း ယုံကြည်ပါကြောင်း၊၁၀။ ယခု အိတ်ဖွင့်ပေးစာပါ ကန့်ကွက်ပြောဆိုမှုသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အတွက် စိတ်ကောင်းစေတနာဖြင့် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက် မရရှိ သောကြောင့် နားလည်မှု အကောက်အယူ လွဲမှားကာ စိုးရိမ်မှုဖြင့် ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤကိစ္စမှာ မူဝါဒဆိုင်ရာအရ အရေးပါပြီး အထူး ထိလွယ်ရှလွယ် အတိမ်းအစောင်းမခံသော ကိစ္စဖြစ်၍ အထင်လွဲမှုများ ပြေလည်သွားစေရန် ပြန်လည်ရှင်းလင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊၁၁။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန် ပုံမှန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ရေး နှင့် သမဂ္ဂကိစ္စရပ်များမှာ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားပညာရေးကောင်စီ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများက သေချာစွာ လေ့လာသုံးသပ် စဉ်းစား ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများ ဖြစ်၍ ယခုရှင်းလင်းပွဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောကြားရန် မရှိပါကြောင်း။ Myanmar Express